Radio Don Bosco - Papa François sy ny mpitsoa-ponenana
Papa François sy ny mpitsoa-ponenana
Naseho ny : 22 jona 2020
Nanamafy hatrany ny firaiketam-pony amin'ny fiahiana ny mpitsoa-ponenana sy ny fiarovana ny tontolo iainana i Papa François, taorian'ny vavaka Angélus notarihany teo amin'ny kianjan'i Masindahy Piera, omaly alahady.
Nasiany teny koa ny fetin'ny ray izay nankalazain'ny firenena maro, tamin'io omaly 21 jona io hatrany. Zavadehibe, hoy ny Papa, ny fiahiana ny mpitsoa-ponenana mba hananan'izy ireo antoka ny fahamendrehany sy ny fiarovana azy, indrindra amin'izao fotoan'ny valanaretina izao. Nanentana ny rehetra hiara-hivavaka aminy i Papa François mba hisian'ny fanavaozana ny fiahiana ny olombelona, indrindra ho an'ireo voatery mandositra sy mandao ny toeram-ponenany sy ny fianakaviany noho ny antony goavana. Nomarihana tamin'ny sabots 20 jona teo, tsiahivina, ny andro erantany ho an'ny mpitsoa-ponenana, araka ny daty nametrahan'ny Firenena Mikambana azy. Nomarihan'i Papa tamin'io fotoana io koa ny fisian'ny fifandraisana eo amin'ny olombelona sy ny tontolo iainana. Lafitsaran'ny fihibohana noho ny valanaretina, hoy izy, ny fihenan'ny fandotoana ny tontolo iainana ka nahafahana nahita indray ny hakanton'ny toerana sasany, tsy nahitana fifezivezen'ny fiara sy tsy naharenesana ny tabataba samihafa. Amin'izao fiverenana amin'ny andavanandro izao, hoy hatrany izy, dia tokony ho tompon'andraikitra amin'ny fikajiana ny tranobe iombonana ny rehetra. Namaranany ny fotoana ny fitondrana am-bavaka ireo raim-pianakaviana nankalaza ny fetiny tamin'io alahady 21 jona io.